အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: ခေတ်သစ် မင်းနန္ဒာ...
Posted by Pyiet Oo Aung at 4:15 AM
တောက်လျှောက်ဖတ်လို့ ကောင်းကောင်းနဲ့ဖတ်လာကာမှ နောက်ဆုံးကျမှ မီးပြတ်ရတယ်လို့ ကွာ......ဟင်းးးးးးးးးးးးး ( မအိ...!)
အရင် Posts တွေနဲ့မတူတဲ့ Style တမျိုးလေးပေါ့။
့ကိုယ့်နာမည်ပါတဲ့ Post ဆိုတော့ ပိုနားလည်အောင် ၃ခေါက်ဖတ်သွားတယ် မဲကြီးရေ။
ပို့ စ်ဖတ်ပြီး ကိုမဲ ဘာတီထွင်မလို့ လဲလို့ မီးပျက်သွားတာကိုးးး :)
ဒီလောက်နည်းပညာတွေပလူပျံပြီး ကမ္ဘာကြီးတောင် အိမ်သာအဆင့်လောက်ဖြစ်နေတဲ့ ၂၆ရာစုကြီးမှာ မီးပျက်တဲ့နိုင်ငံရှိနေသေးတယ်နော်။ မောင်လေးဘလက်ရေ ကောင်လေးနေတဲ့နိုင်ငံက ဘယ်နိုင်ငံလဲဟင်.......ပြောပြနော် :P
ကောင်းလိုက်တဲ့ပို့စ်လေး ဟိ... အော် ဒီလောက်တိုးတက်တာတောင် မီးကပျက်ရသေးတယ် အဲဒါကို ကောင်လေးကမသိဘူးလားလို့
အဟ င့ါကောင်တော့လုပ်ပြန်ပြီ တစ်ညိုး......
င့ါအတွက် အသဲနှလုံးအပို ၂ စုံလောက် ......... ဟိ ဟိ
အင်တာနက်တွေရော ဘာတွေရော ခေတ်ကြီးက တိုးတက်နေပြီးတော့ မီးပျက်သွားတယ်
အကြံတစ်ခုပေးမယ် Dam တစ်ခုလောက်ပြန်ဆောက်ပြီး
ဘလက်ကြီးရေ AD 2500 ထိမီးပျက်နေတုန်းဆိုရင်တော့
ပေးသူယူသူ အပြစ်တူသွားမယ်ဗျ :P
မျက်စိကိုလည်ကရောပဲ။ ကြံကြံဖန်ဖန်ပေါက်ပေါက်ရှာရှာနှယ်။ :P
ကိုမဲကြီး အကြွေးစာရင်းတွေ မှတ်ဖို့ဦးနှောက်အပို တစ်စုံလောက်လိုချင်လို့ ပါ။ ဒီအတိုင်းဆို ၂ရက်လောက်နေရင် မေ့သွားတတ်လို့ ။ AD2500ရောက်မှ မီးက ပျက်ရသေးတယ်။ ကြားတာက ဓါတ်အားပေးရုံကို ကြက်ဆူဆီနဲ့ လည်နေတာ ဆီပြတ်သွားလို့ ဆိုလားပဲ။
မီးက အဲဒီနိုင်ငံမှာအဲဒီအချိန်အထိ ဆက်ပြတ်နေအုန်းမဲ့
ခင်ဗျားကတွေးလိုက်ရင်အဆန်းတွေကြီးပဲ ၊ ဒါကြောင့်လဲ ဘလက်ကြီး ဘလက်ကြီးနဲ့ ဖြစ်နေတာကိုးဗျ :) :D :P
ကိုရင်နက်.... ကျန်တာ ကြိုက်တာဖြစ်
ပြောတုန်းက ဒီလောက်သိပ္ပံအကြောင်း စုံမယ်မထင်ဘူး မင်းနန္ဒာအကြောင်းကို များများဖွဲ့ထားမယ်ထင်နေတာ ခုမှပေးချင်တဲ့ information က ဘာဆိုတာ သဘောပေါက်သွားတယ် သိပ္ပံအကြောင်းတော်တော်စုံသဟ သိပ္ပံမောင်မဲဆိုပြီး ခေတ်လွန်ဝတ္ထုတွေရေးစားလို့ရပြီ ဟိ
တော်ပီ ငါ့ကောင်မလေးဆီ ခိုးခိုးမသွားတော့ဘူး။
အရင်က ကံကောင်းလို့ လွတ်နေတာ ဖြစ်မယ်။
ha ha.. nice imagination. Since this world is so much better in technology. Isn't there something like clone? hee hee..
just my thinking coz i don't want him to die.. hee hee
အဲ့ဒါကြောင့်အင်တာနက်ထဲဝင်ရင် တရဲခြောက်ပါတယ် ထင်နေတာလက်စသတ်တော့ ဒင်း ကိုနေဦး တရဲကိုမြှောက်ပေးပြီး မိန်းမသွားခိုးပေးလိုက်ဦးမယ်
ကဲ လာလေရော့ ၀ုန်း..............ဖျတ်...ဖျတ် ဟာ.......မီးပျက်သွားပြီ ကယ်..........တော်...........မူ.............ကြ.......ပါ......ဗျို့
တော်လိုက်တဲ့ ငါ့အစ်ကို...မီးပျက်လိုက်တော့ အီလည်လည်ကြီး ဖတ်ရတာ ...တော်တော်ကို တော်ျေနပါလား အစ်ကိုဘလက်ရ...း)
အတွေးလေး လှတယ် ညီလေးရေ။ ခေါင်းစဉ်ပေးထားတာလည်း လှတယ်။ ဇာတ်သိမ်းလေးလည်း မိုက်တယ်။
ခင်ဗျားကလည်းဗျာ .. အဟုတ်မှတ်လို့ စိတ်တော်တော်ဝင်စားနေတာ ... ဆိုးသူပဲ
မီးပျက်နေလို့ စာလာဖတ်တာ နောက်ကျ သွားတယ် ရှေ့မှာ ၂၃ ခုတောင် ဖြစ်နေပြီ ဒါနဲ့ တဂ်ထားတယ် နော် မပြောမရှိနဲ့
လိုက်လို့မမီတော့ဘူး 21 ရာစုမှာကျန်ခဲ့လို့ :D
တွေးတတ်ပါပေ့ ကိုအိပ်မက်။ :)
UPS မှမသုံးတာ :)
ဒါကြောင့်ဖြစ်မယ်... ရင်ဂိုက သီချင်းထဲမှာ `အချစ်ဟာ မီးလား´... ရန်အောင်က `ချစ်တယ် မီးရယ်...´ တဲ့...။ ဟုတ်လိမ့်မယ်။
ဖတ်လို့ကောင်းတယ် ဒါပေမယ့် အခေါ်အဝေါ်တွေဖတ်တာ မူးသွားပြီ။
တွေးလည်းတွေးတတ် ရေးလည်းရေးတတ်ပါပေတယ် Blackdream ရယ်...း)
သူငယ်ချင်းရေ..တစ်ယောက်ကလဲမီးပျက်လို့ နှစ်ယောက်ကလဲမီးပျက်လို့ အင်းငါ့ခေါင်းလဲဘယ်တော့ပျက်မလဲမသိဘူး.........ဟိဟိ
လန်ထွက်သွားတာပဲ တွေးတာရော၊ ရေးတာရော.. မိုက်တယ်. :)
=) .. သနားပေမယ့် ရယ်ချင်ချင် ဖြစ်အောင် ရေးတတ်တဲ့ ကိုအိပ်မက်နက် ရဲ့  တွေးခေါ်ပုံကို လေးစားပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းနဲ့ မီးစက်ကြော်ငြာ ရိုက်သင့်တယ် =)
တစ်ကယ်များလားလို့ဖတ်နေတာ ။ကိုယ်များတော်တော်
နောက်ကျနေပြီလားပေါ့။ဒီလူ တော်တော်နောက်တဲ့ လူဗျာ။
ဖတ်ရတာတော့ကောင်းပဗျာ။ မီးကပျက်ရတယ်ရှိသေး။ :P